Umaki: rank math seo | Martech Zone
Umaki: rank math seo
I-WordPress: Susa futhi uqondise kabusha i-YYYY / MM / DD Isakhiwo se-Permalink nge-Regex ne-Rank Math SEO
NgoLwesihlanu, Agasti 6, 2021 NgoLwesibili, Agasti 24, 2021 Douglas Karr
Ukwenza lula ukwakheka kwe-URL yakho kuyindlela enhle yokwandisa isiza sakho ngezizathu eziningi. Ama-URL amade kunzima ukuwabelana nabanye, anganqunywa kubahleli bombhalo nakwabahleli be-imeyili, futhi izakhiwo eziyinkimbinkimbi zefolda ye-URL zingathumela izimpawu ezingezona ezinjinini zokucinga ngokubaluleka kokuqukethwe kwakho. Isakhiwo seYYYY / MM / DD Permalink Uma isayithi lakho belinama-URL amabili, iyiphi ongacabanga ukuthi inikeze le ndatshana ngokubaluleka okuphezulu?
Ungawasebenzisa Kanjani Amathegi Wakho Esihloko (Ngezibonelo)
NgoMsombuluko, Ephreli 5, 2021 NgoLwesibili, Agasti 24, 2021 Douglas Karr
Ubuwazi ukuthi ikhasi lakho lingaba nezihloko eziningi kuya ngokuthi ufuna ziboniswe kuphi? Kuyiqiniso… nazi izihloko ezine ezihlukile ongaba nazo zekhasi elilodwa ohlelweni lwakho lokuphathwa kokuqukethwe. Isihloko Somaka - i-HTML ekhonjiswa kuthebhu yesiphequluli sakho futhi ikhonjisiwe futhi iboniswa emiphumeleni yokucinga Isihloko Sekhasi - isihloko osinikeze ikhasi lakho ohlelweni lwakho lokuphathwa kokuqukethwe ukuze usithole